Imaaraadka Carabta oo markale deeq gargaar ah soo gaarsiiyay Muqdisho | Entertainment and News Site
Home » News » Imaaraadka Carabta oo markale deeq gargaar ah soo gaarsiiyay Muqdisho
Imaaraadka Carabta oo markale deeq gargaar ah soo gaarsiiyay Muqdisho
daajis.com:- Dowladda isutagga Imaaraadka Carabta ayaa mar kale maanta diyaarad siday gargaar kala duwan waxaa ay ka soo dejisay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho.
Wasaaradda gargaarka iyo Guddiga abaaraha oo ay hoggaamineysay wasiiru dowlaha wasaaradda Tamarta iyo Biyaha Shukri Maxamuud Afrax ayaa Safiirka Imaaraadka ee Soomaaliya, Danjire Maxamed Axmed Alcuthman ka guddoomay deeqda gargaarka ah.
Safiirka oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in deeqdaan ay qeyb ka tahay gurmadka ay dowladda Imaaraadka Carabta ku caawineyso dadka Soomaaliyeed ee Abaartu saameeysay.
Wasiiru dowlaha wasaaradda Tamarta iyo Biyaha Shukri Maxamuud Afrax ayaa uga mahad celisay Dowladda Imaaraadka Carabta & Ra’iisul Wasaaraha dadaalkooda ku aadan sidii loo samata bixin lahaa dadka Soomaaliyeed ay saameeysay Abaarta.
Waxaa ay ugu baaqday dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa awooda inay walaalahood Abaadta saameeysay ay ka qeyb qaataan sidii loogu gurman lahaa.
Tan iyo markii Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu ka raali geliyay Imaaraadka Carabta lacagtii loogala wareegay Garoonka diyaaradaha Aadan-Cadde sanadkii 2018-kii waxaa ay soo daabuleyeen deeq kala duwan oo ay uga qeyb qaadanayaan gurmadka abaaraha.